धुर्मुससुन्तली सँग हैन ल’ड्ने नै भए भ्र’ष्ट नेतृत्वसँग लड्न ज्वालाको यस्तो सुझाव – Gorkhali Dainik
March 25, 2021 690
सामाजिक अभियन्ता ज्वाला संग्रौलाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रीकेट रंगशाला बन्न हुँदन,ब’म पड्काउछु,डोज’र लगाउछु भन्दै खुलम खुल्ला मि’डियामा आउँने तारा बराललाई भेटेर कुरा गर्नको निम्ति आ’क्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ ।
मैले तारा बराल दिदी सँग एक पटक भेटेको हुँ अब पुन: भेटेर कुरा गरौं,लड्ने भए भ्र’ष्टाचार ग’र्ने सँग ल’ड्नुहोस तर गौरवको आयोजना बनाउने सँग नलड्नु भन्दै सु’झाव समेत दिनु भएको छ । उहाले सामाजिक संजाल फेस्बुकमा यसरी लेख्नु भएको छ:
“बि’रोध समर्थन आफ्नो ठाउमा छ , तर तारा बराल दिदीले रंगशालामा खु’लेआम ब’म पड्काउॅछु भन्दै हिॅड्नु कतिको जायज हो? सरकारी जग्गामा धुर्मुसले रंग’शाला बनाए भन्नेले नेता प्रधानमन्त्री र भू’माफियाले दिन’दहाडै क’ब्जा गरेका सरकारी जमिनको खो’जी गर्नु पर्दैन ? जे भए नि च’न्दै मागेर भए नि धुर्मुस्ले बिगार्ने, भत्काउने र बि’ध्वंस म’च्चाउने काम गरेका त छैनन् नि । नि’र्माणकै काम गरेका छन्! तपा’ईको रिस ई’बि प्रचण्ड र रेणुसंग होला , त्यो आफ्नो ठाउॅमा होला !
दम भए प्रच’ण्डका बाउछोरी सॅगै ल’ड्नुस् , मा’रपिट गर्नुस् हामीलाई सरो’कार छैन तर देशको लागि केहि गर्छु भनेर हिॅडेका धुर्मुस सुन्तलीलाई बा’रबार रुवाउने काम नग’र्नुस् । अब आईन्दा फेरि यस्ता नका’रात्मक कु’राहरु प्र’चार गर्दै हिॅड्नु भो भने युवाहरुले कारबाही गर्छन् । यस्लाई धम्की हैन सुझाब सम्झनुस् र आफूलाई सच्च्याएर हिॅड्नुस् । तारा दिदी , तपाईसंग एकपटक मेरो भेट भैसकेको छ । अब फेरि एकपटक तपाईसॅग भेटेरै म बहस गर्न चा’हन्छु ।संजालमा धेरै ब’क’बक ठिक हुन्न। Let’s meet !”
यो पनि,,, नेपाल यस्तो भूगोल हो जहॅा कतिखेर कस्को मति भ्रस्ट हुन्छ थाहै हुन्न । नेतादेखि ज’नतासम्म यहॅा प्राय डरलाग्दा मान्छेहरु मात्रै छन् । आज तपाईको पछि लाग्नेहरु भोलि अर्कैको पछि लाग्छन् । आज तपाईको गीत गाउनेहरु भोलि अर्कैको सुरतालमा नाच्न थाल्छन् । आज तपाईको रक्षाको लागि खुकुरी बोक्नेहरु भोलि त्यहि खुकुरी लिएर तपाईलाई काट्न आउॅछन्।
Prev१२ लाखमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर – यसरी बनाइन्छ ! थाहा पाइराखौ !
Nextभारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेसँगै नेपालीहरू घर फर्कन थाले, फर्कनेमा संक्रमित पनि
अक्सिजनको आपूर्तिमा रो’क्नेलाई फाँ’सी